IMISEBENZI YETHU - ISUYI IMPORT KANYE NOKUXHUMANISA CO., LTD
Sinikeza izinsizakalo zokuhlela ukuthengwa kwempahla yonke futhi sinikeze nosizo oluphelele eChina lokuthengwa kwezimpahla ngokulethwa.
● Udinga nje ukukhombisa imikhiqizo yenzalo
● Sinikezela ngezinsizakalo zokuthenga izimpahla eChina ezinhlanganweni ezisemthethweni nakubantu ngabanye
● Sizokusiza ukuthi uthenge izimpahla eChina ngqo kumenzi wazo.
Sihlala siqapha futhi sihlaziya izingxenye zemakethe, siqhathanisa ikhwalithi yabahlinzeki, ngakho-ke singancoma ifektri, umenzi noma izimakethe ezidayisa impahla yonke ezinikezela umkhiqizo owudingayo wezinga elifanele lekhwalithi ngamanani entengo amahle kakhulu.
Sihlela ukulethwa kwamasampuli womkhiqizo, sihlole ukuthembeka komhlinzeki, usizo kwinqubo yezingxoxo, kanye nokulungiselela nokuphothula isivumelwano sokunikezwa kwemikhiqizo.
Imisebenziokuhlobene nokuthengwa kwempahla okufana nalokhu:
● ukuthenga ngokuhlanganyela
● ukubonisana ngokuthengwa kwempahla
● izingcaphuno zemibuzo
● izingxoxo zenkontileka
● Ukukhethwa kwabaphakeli
● ukuqinisekiswa kwabahlinzeki
● ukuphathwa kwempahla
Sifuna imikhiqizo evela kubakhiqizi abahlukahlukene ngokusho kwezicelo zakho, ukuze ukwazi ukuyikhetha ngokuya ngezidingo zakho, unikeze inani lesilinganiso sentengo, ukukhetha okukhulu kubakhiqizi ukuqhathanisa amanani nekhwalithi. Sizokunikeza imikhiqizo egculisayo ngentengo ephansi. Isiqinisekiso sokuthi umkhiqizo wakho owukhethile uzoba ngentengo ekhangayo.
Ukungathí sina kungumthwalo wemfanelo. Ukusebenza kahle kuyikhwalithi. Umkhawulo ulwela.
Senza ukuhlolwa komkhiqizo kuzo zonke izigaba zenqubo yokukhiqiza,
● ukusiza ukuqinisekisa ukuphepha kokukhiqizwa,
● ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo
● vikela isithombe somkhiqizo.
Ngasikhathi sinye, siqinisekisa ikhwalithi nokuvikelwa komkhiqizo kuwo wonke umzila wokulethwa kwezimpahla lapho ziya khona. Zikhulule ekukhathazekeni mayelana nekhwalithi yomkhiqizo nokulethwa. Izimpahla zakho zizolethwa kuwe "ngesandla" ngokungabizi, ngokuphepha nangesikhathi.
Ukuhumusha kobuchwepheshe ezingeni elifanele
Uma udinga umenzeli oqeqeshiwe, umhumushi eChina, ke inkampani yethu isilungele ukubambisana nawe - besilokhu sisebenza kahle ebhizinisini le-ejensi yamakhasimende ethu eChina isikhathi eside.
Abahumushi bethu abanezimfanelo:
● ukumelana nengcindezi,
● amakhono okuxhumana,
● ukunaka, ikhono lokwenza kahle ezimweni ezingejwayelekile.
Banolwazi lomsebenzi ozimele, izingxoxo eziphumelelayo namadili aphethwe. Insizakalo enikezwa inkampani yethu izokuvumela ukuthi usebenze ngempumelelo nabalingani bakho baseChina, udwebe amaphepha ngokufanele lapho uthumela impahla usuka eChina, uthenge izimpahla ngqo kubakhiqizi baseChina noma ezimakethe zaseChina ezidayisa yonke impahla.
● Sizokunikeza ukuhumusha okubhaliwe ukuze ungakhathazeki ngezinhlamvu zesi-Chinese!
Ukuhumusha ngasikhathi sinye: Sizohlinzeka ngokuxhaswa kwesikhathi sangempela emsebenzini wakho phesheya!
Inkampani yethu inezinqolobane eGuangzhou nase-Yiwu, singathola futhi sigcine izimpahla. Indawo yokugcina izinto ingu-800 m2, ingabamba iziqukathi ezingama-20 ngasikhathi sinye, isitoreji asikhokhelwa
Inkampani yethu ineqembu layo labahambisi abasebenza ngokuqinile ngokwemiyalo yekhasimende. Imishini yanamuhla yokugcina isetshenziswa nemishini ekhethekile ikuvumela ukuthi wenze noma yiluphi uhlobo lomsebenzi. Sinikela ngamanani amahle nezimo ezilula, kufaka phakathi ukuthi kungenzeka kube nokugcinwa kwamahhala kokudla okusele komkhiqizo kuze kufike ukuthunyelwa okulandelayo endaweni yokugcina izimpahla.
● insizakalo esezingeni eliphakeme
● kufaka phakathi ukugcinwa
● isitoreji esiphephile
● ukucubungula izimpahla neziqukathi zamapharamitha ahlukahlukene.
Ukulethwa kwempahla endlini ngendlu
Sisebenza kunoma yiluphi uhlobo lwezokuthutha kwempahla, kufaka phakathi "Ukulethwa kwempahla endlini ngendlu."
Akusadingeki uchithe isikhathi ubheka imoto, ukhathazeke ngokuphepha kwempahla, ngesikhathi osichitha uletha.
"Ukulethwa kwendlu ngendlu kwempahla" - inzuzo yale nsizakalo ukuthi ifaka phakathi uhla oluphelele lwezinsizakalo, kusukela ekuhlinzekweni kwezokuthutha, ukulethwa endaweni yokuthola kanye nokugcina ngomshwalense wezimpahla zakho ngesikhathi sokuhamba.
Kwanele ukwenza isicelo enkampanini yethu, konke okunye kuzokwenziwa ngabakwa-logisticians bethu futhi kuhlanganiswe nawe.
Sinikeza izinsizakalo zomshuwalense nganoma iyiphi impahla.
Inkampani yethu ine 10isipiliyoni seminyaka ukuvunyelwa kwamasiko kusuka eChina kuye eRussia
● unedumela elihle nokuqashelwa emakethe
● ukubambisana kwesikhathi eside nokuzinzile nezinkampani ezinkulu zokuhweba eRussia.
Ukuphepha, ukugcina isikhathi, ukusebenza kahle, intengo ekhangayo (isb. Isinxephezelo esiqondile sokulethwa sekwedlule isikhathi noma ukulahleka)
Ukungathí sina kungumthwalo wemfanelo. Ukusebenza kahle kuyikhwalithi. Ubukhulu ukufisa
8 Ukuthumela izincwadi zesimemo, ukucubungula ama-visa
Inkampani yethu ingakuthumela isimemo se-visa neminye imibuzo ukuxazulula okusemthethweni kohambo lwakho oluya eChina.
Wena ungakhetha uhlobo lwesimemo se- i-visa yezokuvakasha noma yebhizinisilokho kuzoshiya izinkumbulo ezingenakulibaleka ngohambo lwakho oluya eChina.
9Umhlangano womuntu siqu esikhumulweni sezindiza
Imibukiso ehambisana nayo, izimakethe ezivakashelayo nezimboni kulo lonke elaseChina
Inkampani yethu ihlinzeka ngezinsizakalo zokuvakashela izitshalo zokukhiqiza zemikhiqizo oyidingayo ukuze ujwayelane nemishini nesikali sokukhiqiza, inqubo yokukhiqiza yokuqiniseka okwengeziwe esitshalweni nakumkhiqizo.
Futhi, ukuxhaswa emibonisweni nasezimakethe zokujwayela okuphelele ngolwazi onentshisekelo kulo.
Sizoxazulula yonke imibuzo enzima kuwe eChina.